Maxay ahayd sababta Abiy Ahmed looga musaafrin rabay dunida? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Maxay ahayd sababta Abiy Ahmed looga musaafrin rabay dunida?
Dacwad oogeyaasha dalka Itoobiya ayaa maxkamad soo taagay shan qof oo lagu tuhunsanyahay argagixisannimo, iyagoo loo heysto iney isku dayeen dilka ra’iisul wasaare Abiy Axmed ka dib markii bishii Juun ay bam gacmeed ku tureen fagaare uu ku sugnaa.
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isagoo ka hadlayey munaasabadda daahfurka barnaamijka dib u habaynta waxbarashada dadweynaha wuxuu hadal duurxul ah u diray mucaaradka dawladdiisa ka soo horjeeda.
24 Sebtembar 2018
Jidadka Muqdisho, seedka gaadiidka, iyo gawaarida midigta laga wado
Wariye Saxansoxo iyo Dalxiiskii Xamar
ICG: ‘Khatarta Al Shabaab waxay u wareegaysaa Tanzania’
Sawirro: Carwada Buugaagta Muqdisho
Saamayn intee la’eg ayuu Soomaaliya ku yeelan karaa isbahaysiga saddex geesoodka ah ee Dubai?
Previous articleMidowga Yurub ayaa daboolka ka qaaday in isbeddel laga sameeyey waxbarashadda Jamhuuriyadda Somaliland oo ay kordheen wiilasha iyo hablaha dugsiyada la qoraa.
Next articleDagaal ka dhacay xabsiga Boosaaso labo qof oo ku dhintay iyo labo askari oo dhaawac ah kadib markii ciidamo booliis ahi qabsadee xabsiga,